Nooca cusub ee COVID-19 oo ka Bilaabmey wadamo Afrika ah sida ay sheegtey CDC – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Nooca cusub ee COVID-19 oo ka Bilaabmey wadamo Afrika ah sida ay...
Nooca cusub ee COVID-19 oo ka Bilaabmey wadamo Afrika ah sida ay sheegtey CDC
Xarunta Afrika ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (Afrika CDC) ayaa Sabtidii sheegtay in hirarka labaad ee socda ee COVID-19
“Afrika waxay hadda la kulmeysaa kororka tirada la xaqiijiyay ee COVID-19,” ayaa wakaaladda daryeelka caafimaadka gaarka ah ee Midowga Afrika (AU) ku sheegtay daabacaadkeedii ugu dambeeyay Sabtidii.
Ugu yaraan 40 waddan ayaa la soo dersay mawjad labaad oo cudurkan ah illaa iyo Janaayo 27, oo ay ku jiraan dhammaan waddamada ku yaal gobolka Koonfurta Afrika, ayuu lagu yiri Africa CDC.
“Mawjaddan cusub ee infekshannada waxaa loo maleynayaa inay la xiriirto soo bixitaanka noocyo kala duwan oo la sii gudbin karo,” ayaa lagu yiri Africa CDC.
Sida laga soo xigtay wakaaladda, natiijooyinka hordhaca ah waxay muujinayaan in seddex nooc oo cusub oo la mid ah laakiin kala duwan oo kal daran loo yaqaan ‘Coronavirus 2’ (SARS-CoV-2), 501Y / VUI – 202012/01, 501Y.V2, 501Y.V3, laga soo sheegay United Boqortooyada, Koonfur Afrika iyo Brazil, siday u kala horreeyaan, “si weyn ayaa looga sii gudbiyaa marka loo eego noocyada kala duwan ee horay u faafi jiray, iyada oo lagu arkay daadad fara badan oo fayras ku dhaca.”
In kasta oo xaqiiqda ay jirto in xog xaddidan ay hadda ka jirto heerka ay noocyadan cusub ku faafeen Afrika, haddana CDC-da Afrika waxay carrabka ku adkeysay in xogta hordhaca ah ay muujineyso in nooca 501Y.V2 laga soo sheegay 22 dal oo adduunka ah oo ay ku jiraan Koonfur Afrika, Ghana, Botswana iyo Zambiya.
Africa CDC waxay hada lashaqeeneysaa la-hawlgalayaasha iyo dowladaha xubnaha ka ah khariidaynta faafitaanka gobolka ee noocyada cusub ee Afrika iyadoo loo marayo ilaalada gobolka; iyo in la taageero xarumaha shaybaarka ee heer sare si wax looga qabto baahiyaha soo ifbaxaya ee SARS-CoV-2 iyo cudurada kale ee Xubnaha ka ah iyo in la hubiyo helitaanka juquraafi ahaan wakiil iyo xog waqtigeeda ku habboon.
Bixinta hagitaan farsamo oo loogu talagalay ilaalinta genomic ee SARS-CoV-2 ee Afrika; hubinta isku xigxiga tayada-hubinta shaybaarada gaarka ah iyo xarumaha shaybaarka gobolka; iyo in la xoojiyo awooda shaybaarrada heer qaran iyo heer gobol si wax ku ool ah looga jawaabo baahiyaha isdaba jooga ah ee soo ifbaxaya ayaa sidoo kale la sheegay inay yihiin meelaha ugu waaweyn ee faragelinta Afrika ee CDC ee dagaalka lagula jiro aafada.
Sida laga soo xigtay tirakoobyadii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Africa CDC, tirada la xaqiijiyay ee COVID-19 ee qaaradda Afrika waxay ahayd 3,534,360 ilaa subaxnimadii Sabtida.
Sida laga soo xigtay dashboard-ka wakaaladda, tirada dhimashada ee la xiriirta masiibada ka dhacday Afrika waxay ahayd 89,839 illaa iyo subaxnimadii Sabtida.
Guud ahaan 3,014,896 qof oo uu ku dhacay COVID-19 ayaa ka bogsadey qaaradda oo dhan, ayaa la sheegey.
Gobolka Koofurta Afrika ayaa ah meesha ugu badan ee ay saameynta ku yeelatay Afrika marka la eego tirada kiisaska la xaqiijiyay ee wanaagsan, waxaana ku xigta gobolka waqooyiga Afrika, sida ay sheegtay hay’addu.
Previous articleNigeria oo diwaan galisey nooca cusub ee covid 19 ee laga helay ingriiska.
Next articleJames Swan oo gaaray Kismaayo
Dawlad Deegaanka Somalida oo Tirada ugu badneyd laga helay covid19.